Tuna patty recipe miaraka amin'ny Thermomix | ThermoRecipes
Appetizers115 minitraOlona 6-8
Ny tuna empanada dia tsy azo hadinoina amin'ny fankalazana rehetra. Mety tsara raha miaraka isika mankalazà fitsingerenan'ny andro nahaterahana, olomasina, na hariva amin'ny fivorian'ny fianakaviana.
Ny farany nataoko, raha tadidiko tsara, dia ny alin'ny Mpanjaka. Tamin'io andro io ny maraina dia nitondra ny zafikeliny vavy foana ny ray aman-dreniko mba handefa ilay taratasy any amin'ireo olon-kendry. Ka araraotiko ny fanomanana ny roscones, ny sakafo amin'ny Andron'ny Mpanjaka telo sy ny Sakafo hariva aorian'ny cavalcade an'ny Majesties ny Magy. Io dia miaraka amin'ny fanomezana be dia be aho ary tsy miseho ao an-dakozia akory.
Fifaliana ny mahita ny endrik'ireo zanako kely manao matso. Tsy misy zavatra tsara tarehy kokoa noho ny mijery ny mason'ny ankizy amin'izao fotoana izao. Ny zanako vavy dia tsara vintana tokoa ny mijery azy isan-taona miaraka amin'ny raibe sy renibeny efatra, ny rahavaviko, ny sakaizany ary izahay, ny ray aman-dreniny. Saingy amin'ny farany dia toa somary mandringa ihany ny tolakandro nefa tsy fantatsika izay hatao, noho izany, matetika izahay no tafangona ao an-trano ary io no iray amin'ireo fomba nahandroiko. Sakafo hariva.
Tiako ny manamboatra ilay paty paty, saika ataoko foana ny koba sy ny fonosana, fa raha mandeha zavatra tratra ara-potoana aho dia mividy puff pastry vita. Imbetsaka ianao no naneho hevitra taminay tao amin'ny vondrona Facebook fa ny koba mofomamy "Lidl" dia nanankarena be ary tokony hilazako aminao fa nanandrana azy io indray mandeha dia omeko azy ny kalitaony ary satria tena tsara.
Fenako dipoavatra, tongolo, kapoakan'ny tuna ary atody nandrahoina. Na dia nahita resipeo roa aza aho ary heveriko fa hamporisika ny tenako hiomana famenoana vaovao. Tsy manapa-kevitra aho eo anelanelan'ny legioma ary ny horita sy tuna, samy mijery tsara izy ireo ary azo antoka fa matsiro.
Alohan'ny handehanako amin'ny resipe dia tiako homena ny misaotra ny sakaizako sy ny namako Diana fa tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany dia nampiantrano anay tamin'ity fomba fahandro ity aho ary tiako izany.
Fomba fahandro tonga lafatra amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana sy fivoriana tsy ara-potoana.
Fotoana manontolo: 1h 55M
90 g ny larda na dibera
30 g ny masirasin'ny mpanao mofo vaovao na masirasira mpanao mofo tsy ampy rano 1 sachet
Atody 1 hosodoko
Tongolo 300 g
150 g ny dipoavatra mena
150 g ny dipoavatra maitso
Voatabia torotoro 100 g (voajanahary na am-bifotsy)
Bonita 200 g namboarina na menaka oliva (araka ny tsirony)
Atody nandrahoina 2
Voalavo oliva mainty kely misy p 1
Arotsanay ao anaty vera ny rano, menaka, divay ary dibera. Izahay dia manao fandaharana 1 minitra, 37º, hafainganam-pandeha 2.
Izahay dia manampy ny atody sy ny masirasira vaovao. Mifangaro izahay 5 segondra, hafainganam-pandeha 4.
Raha mampiasa masirasira tsy ampy rano ao sachet isika dia tokony ampiana miaraka amin'ny lafarinina.
Ampiarahinay ny lafarinina sy ny sira. Izahay dia manao fandaharana 15 segondra, hafainganam-pandeha 6 ary avy hatrany aorian'izay dia manao programa izahay 2 minitra, mihidy vera, hafainganam-pandeha.
Avelao hipetraka ao anaty vera ny koba miaraka amin'ilay bikabita mandritra ny 30 minitra, mandra-pivoakan'ny avo roa heny ny volony. Matetika aho no manitatra ny fotoana hatramin'ny 2 ka hatramin'ny 3 ora ka ny koba dia mandevona kokoa ary mahazo vokatra tsara kokoa.
Nataonay tao anaty vera, tongolo, peppers mena sy maitso, voatabia, menaka ary siramamy ary sira. Miala amin'ny programa izahay Hafainganana 4 segondra 5. Miaraka amin'ny spatula isika dia mampidina ny sisa amin'ny rindrina amin'ny lelany sy programa 20 minitra, maripana varoma, hafainganana 1 1/2.
Esory amin'ny kaontenera iray ary ampio ilay bonito potipotika sy raraka.
Ho an'ny fiangonana:
Hafanaina hatramin'ny 200º ny lafaoro amin'ny hafanana ambony sy ambany.
Miaraka amin'ny fanampian'ny pin rolling, dia namelatra ny antsasaky ny koba teo anelanelan'ny plastika roa izahay ary nametraka azy teo amin'ny lovia fanaova nopetahany taratasy namboarina.
Izahay dia mamelatra ny famenoana ambonin'ny tany manontolo ary mametraka ireo atody efa nandrahoina nandrahoina teo amboniny ary, raha tiantsika, ireo oliva mainty.
Namelatra ny antsasany hafa tamin'ny tsipika mihodina ary nandrakotra ny famenoana. Izahay manapaka sy manisy tombo-kase ny sisiny. Matetika aho no manapaka azy ireo amin'ny cutter pizza ary manisy tombo-kase azy ireo amin'ny feon-tsilo.
Miaraka amin'ny fanapahana koba dia manaingo ny tampony isika. Kitiho amin'ny koba ny koba mba hivoaka ny etona ary hosory amin'ny atody nokapohina.
Napetraka tao anaty lafaoro izahay ary tao anatin'ny 30 minitra teo dia nahazo ny empanada galisiana izahay.
Fanazavana fanampiny - Pie legioma / Horita feno habibiana sy tuna empanada
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Appetizers, Tsy mahazaka laktose, Mihoatra ny 1 ora sy 1/2, Arina sy mofo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Appetizers » Tuna pie
Uhmmm hoe ahoana ny endriny, hiezaka ny hanao azy aho! Inona ny masirasira omenao soso-kevitra vaovao na tsy ampy rano? Misaotra!
Matetika aho no manamboatra azy amin'ny masirasira vaovao, fa raha manana masirasira tsy ampy rano ianao dia aza manahy fa mety tsara koa izany.
Salama e! tsara toa inona izany ary tena faly aho manao azy! Te-hanao iray amin'ny antsasaky ny fangaro aho, mbola hadalana ihany ny anontaniako, saingy hitovy ve ny hafainganam-pandeha, ny mari-pana ary ny fotoana? Azo ajanona toy ny koba pizza ve ny koba?
Ho ela velona ny empanada! Tiako izy izany. Mamela hevitra vitsivitsy ho anao aho:
- akoho misy tongolo soo betsaka sy dipoavatra mena.
- saosy saosy ra sy tongolo
- cod ary tongolo be dia be
- patsa sy gula
Ary eny, marina izany, tena tsara ny pastry Lidl puff, ny olana hitako fotsiny dia ny efa-joro ary rehefa nividy azy dia nisy bobongolo boribory ... hehehe tsy maintsy nanamboatra kely ny sisiny aho, fa hey, nahafinaritra ilay quiche.
Izay sosokevitra tsara Irene, andramako tsikelikely izy ireo ary holazaiko anao.
Mivoaka matsiro izy ireo !!!!! Indraindray dia ataoko amin'ny ham sy fromazy mamy ary matsiro be koa!
Azoko antoka fa tian'ny zanako vavy ity !! Misaotra anao.
Oadray, tiako ny empanada.
Fonosina peppers sy piquillo peppers (fomba fahandro avy amin'ny namako Gloria), mirentirenty ihany koa izy ireo.
Misaotra anao Delfi. Fifangaroana tsara ho an'ny famenoana. Mila manandrana aho.
oops! Fanontaniana iray hafa: raha manampy bonito vaovao isika dia ampiana miaraka amin'ny saosy ve izany? Azoko atao ny mieritreritra holatra iray feno ham ...
tsara bika! fanekena hafa:
ham, bacon ary daty amin'ny antsasany.
Hataoko amin'ny reniko izany, liana amin'ny daty izy.
ny jijas misy atody, mifangaro tsara ... noana aho !!!
Mahafinaritra !! Miaraka amin'ny soso-kevitrao rehetra dia hahatonga ahy ho noana ihany koa.
Mmmmm !!! tsara tarehy izany. Tiako ny empanada ary isaky ny manao fety na misakafo ato an-trano aho dia manomana iray. Ny tena mahomby indrindra dia ny: silaka tranchetes karazana fromazy, bacon diced (oscar mayer no tsara indrindra), silaky ny ham ary daty. Tsy misy fako io.
Tamin'ny alin'ny Taom-baovao, nanararaotra ny ambiny azoko tamin'ny Krismasy, nataoko ity empanada manaraka ity (mazava ho azy miaraka amin'ny koba sarom-borona) ary gaga ny fianakaviana rehetra.
Nisy tongolo karamika sisa tavela ary nampiasaiko ho toy ny fotony.
Nanana gilasy Roquefort tao anaty vata fampangatsiahana izay namboariko ho an'ny salady, navoakako nandritra ny fotoana kelikely alohan'ny nanaovako azy ary napetrako teo ambonin'ny tongolo.
Avy eo dia nasiako tapa-kazo ary farany nanana holatra antsasaky ny fonosana aho, namboariko kely tao anaty lapoaly ary napetrako farany. Tena nahafinaritra ilay izy.
Ry ando, sosokevitra nomenao anay fotsiny. Mahandro tsara, saika tsy mieritreritra sy manararaotra ny zava-dehibe dia nanao starter ideal ianao !!
Ny hany zavatra tsy nilelaka ny gilasy ary nandena ny mofomamy puff be foana ve?
Salama, tsy levona. Nahazo ny fomba fanamboarana gilasy avy amin'ny boky "ny fomba fanamboarana ny hostesses" natao ho an'ny salady. Nesoriko ilay izy ary napetrako tao anaty koba rehefa tao anaty mari-pana. Nipoitra toy ny fiparitahana izany. Ary ao amin`ny lafaoro tsara tsy soak ny koba. Miarahaba ary misaotra indray. Tiako ity tranokala ity.
Misaotra Rocío, hanandrana aho.
Silvia dia toa tsara tokoa, amin'izao fotoana izao dia manamboatra saosy aho hanomanana ny ahy hisakafo hariva, fa raha tokony ho tsara tarehy kosa dia hamono akoho voatoto sisa tavela amin'ny sakafoko aho, ary atody nandrahoina roa, toa anao, andao hojerentsika ny fomba fahombiazany, hotantaraiko anao izany.
Azo antoka fa ho tianao amin'ny akoho izy, mifangaro tena tsara izy io.
Mahavariana dia hoy izy:
Fetsy: Ataoko aloha ny famenoana satria tsy maintsy mangatsiaka ny fanangonana ny pie ary amin'izay dia milamina tsara nefa tsy mandeha amin'ny vata fampangatsiahana, izay tsara kokoa. Avy eo ataoko ny koba nefa tsy manasa vera na inona, mijanona ho mena kely nefa manankarena tsiro.
Valiny amin'ny Fahagagana
Hevitra tsara izany, noho izany ny koba dia misy mikasika ny famenoana. Misaotra betsaka, hizaha toetra azy izahay.
Salama namana, nanandrana iray nahafinaritra sy melon tsara aho, ny tsy fitovian'ny tsiro mamy sy masira dia manome tsiro tena tsara. Fenoina pudina mainty irery, tena tsara koa izy io.
Andriamanitro, satria nolazainao izany fa tsy azoko an-tsaina mihitsy ny fitambarana toa izany. Fa ny mifanohitra amin'izany dia tokony hanome fikitika mahafinaritra azy. Misaotra anao!!
Fisalasalana kely fa manana adala aho mitady masirasira mofo tsy misy rano ary noooooo laaaaaa hitako fa mitovy amin'ny masirasira simika izany? Hitako fa mora ilay vaovao nefa ny iray tsy
Tsy mitovy amin'ny simia izany. Izy io koa dia tonga amin'ny valopy ary mividy azy amin'ny marika marin-katsaka aho. Manana izany amin'ny carrefour, hipercor, alcampo ...
Ny empanada dia matsiro, atolotro ilay namboarin'i Neny, rehefa masaka izy dia notsimponiny daholo ary nataony super empanada, koa ny tena matsiro dia ny zorza, misaotra zazavavy, arahaba
Zorza? Azonao lazaina amiko ve izany? Misaotra betsaka!
bluecar dia hoy izy:
Manoro hevitra ny an'ny Pilar mpifanila trano amiko aho. Fofom-boaloboka voadio tongolo gasy, fromazy sy paoma voahidy. Original sy matsiro. Ankoatr'izay, mangatsiaka manankarena kokoa izy io ary tian'ny ankizy izany. Misaotra an'ireo resipeo, andao hojerentsika raha sahy ianao ary manao zavatra ho an'ny sakafo, izay tianay hapetraka ao an-trano: P. Fiarahabana mahery.
Mamaly an'i bluencar
Diosssss ke hosodoko amin'ity tolakandro ity dia ataoko tsy misy fisalasalana izany. Efa nanandrana azy niaraka tamin'i Philadelphia, daty ary bacon aho ary maty koa io.
Ataoko miaraka amina fromazy Philadelphia sy alika mafana mafana fonosana iray izy ireo. Ampiako amin'izy ireo ny fromazy, aparitako manerana ny koba ary apetaho eo amboniny ny daty. Isaky ny ataoko dia tiako be izany. Manantena aho fa tianao koa izany. MISAOTRA
Misaotra an'i Rosa, sosokevitra iray hafa izay tsy maintsy andramako. Mirary ny soa indrindra
Salama indray zazavavy. Ny pie ... Mahafinaritra. Ataoko tsindraindray feno saosisy ra, paoma pippin ary voanjo kesika izany indraindray. Mora be ny manao azy ary matsiro.
Fifangaroana tsara inona, tiako ireo singa telo rehetra. Hoporofoiko izany. Mirary ny soa indrindra
Misaotra betsaka noho ny resipeo rehetra, mamaha sakafo atoandro sy sakafo hariva maro ho ahy ianao ary ity hevitra momba ny empanada ity dia tsara ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny zanako vavimatoa tamin'ity herinandro ity.
Manana fanontaniana aho, inona no ilàna ny fihodinanan'ny havia maodely vaovao, maro ny resipeo vita amin'ny fihodinam-pifaliana ary tsy sahy manao izany aho raha sendra tsy mahomby amin'ny maodely 21, afaka manampy ahy ve ianao? raha tsy izany dia mieritreritra aho fa mitovy ireo maodely roa, sa tsy izany?
Misaotra hatrany amin'ny zavatra rehetra.
Beatriz dia misy fahasamihafana eo amin'ny modely TM-21 sy ny TM-31. Rehefa miteny isika hoe "mivily havia, hafainganam-pandeha sotro" ao amin'ny TM-21 dia tsy maintsy mametraka ny lolo amin'ny lelany ianao ary mametraka ny hafainganam-pandehanao ambany indrindra, izay heveriko fa 1. Ny TM-21 dia mafana aloha, ka raha ao amin'ny Recipe I Lazao ny mari-pana 100º, ataovy 90º ary potipotika amin'ny hafainganam-pandeha 5 izahay, ao amin'ny TM-21 dia potipotika amin'ny hafainganam-pandeha 3 1/2.
Manantena aho fa nanampy anao zavatra iray. Mirary ny soa indrindra
Misaotra betsaka anao Silvia, efa mazava amiko ny lohahevitra momba ny fomba fahandro mba hahafahako manangana tena hanomanana ny sasany.
Toy ny mahazatra dia mamaha ny fisalasalako ianao.
Mampiaiky volana ny empanada !!! Nataoko nihinana izy androany ary tsy nisy sisan-javatra sisa tavela… tena matsiro tokoa !!!! Misaotra tamin'ny resipeo sy arahaba soa ato amin'ny bilaogy !!!
Sonia Faly aho fa tianao izany. Ao amin'ny fianakaviako dia tiantsika rehetra izany ary mila ataoko foana izany amin'ny fihaonan'ny mpianakavy.
Nataoko tamin'ny andro lasa, ary tena tsara ... fa
nijanona toy ny koba mofo ny koba fa tsy toy ny ravin-tsakafo puff
Raha vantany vao manao ny recette ny thermomix ary mamela azy hiala sasatra dia navelako nandritra ny adiny 3. Mila mametafeta ny koba amin'ny fomba iray ve aho mba hahalalany an'io firakotra io? Ahoana no anaovanao ny mofomamy puff? ...
Cristina, marina ny anao, ny koba dia karazana mofo ihany. Raha mahita mofomamy puff hafa aho dia halefako any aminao. Ny marina dia ny fotoana farany nahavitako azy tamin'ny mofomamy puff avy amin'ny tutupl. Mivoaka tsara izany.
Silvia, tiako koa ny manandrana azy amin'ny mofomamy puff. Raha hitanao io dia holazainao aminay. Na izany na tsy izany dia nanjary matsiro ity
Valiny amin'i CHUS
Hijery hatrany aho ary raha mahita zavatra dia holazaiko anao. Mirary ny soa indrindra
toa tsara aho fa vaovao amin'ity sy ny ankizilahy manandrana
Salama, te hanontany aho raha mofomamy na vaovao ny pastry puff? ary avy eo tiako ho fantatra kely ihany koa ny fomba fametrahana azy, raha toa ka misy sosona na voakapa handrakofana ny tampony? Na izany na tsy izany, fanontaniana novice, misaotra betsaka.
Tsara, nataoko omaly, ny koba no tsara indrindra talohan'ny loza niaraka tamin'ny koba fa ankehitriny miaraka amin'ny therm, tsara izany, hello
Faly aho fa tianao i Fina. Ao an-trano foana aho no manomana izany amin'ny fivorian'ny fianakaviana.
M.Carmen dia hoy izy:
Ny pintan'i empanada, nataoko tamin'ny fotoana sasany, fa tsy misy ifandraisany amin'ny vokany, anio tolak'andro dia ho hitantsika ny fahombiazany. Misaotra an'ireo resipeonao, tsara izy ireo
Valiny tamin'i M.Carmen
yolan dia hoy izy:
Nijery ilay pejy aho ary nahagaga fa vaovao amin'ny thermomix aho ary nanampy ahy betsaka ianao, hanohy hitsidika azy aho misaotra.
Mamaly an'i yolan
Marcelline dia hoy izy:
Tsara anio no anaovako sakafo hariva, miaraka amin'ny ratatouille izay navelako omaly kalon'ny tuna sy atody nandrahoina.
Fanindroany izao no nahavitako azy tao anatin'ny 1 herinandro !! lol dia matsiro ... amin'ny fotoany, tsy maina izy ary ny koba Lidl hitako fa tena tsara izy !!
Misaotra misaotra misaotra misaotra !!
Misaotra anao nanaraka anay ary faly aho fa nahita fahombiazana toy izany niaraka tamin'ny empanada. Mirary ny soa indrindra
Salama Silvia! Omaly dia nataoko ny empanada ary ity tena tsara tiako ho fantatra raha manana ny fomba fanamboarana hanaovana azy amin'ny ham sy fromazy ianao, ilay iray ataoko somary maloto. Misaotra anao. Tiako ny bilaoginao, manampy ahy be dia be izany.
Conchi, tsy manana an'ity fomba fahandro ity aho fa andramo jerena ny fomba fiasan'ity koba ity ary lazao anay hoe ahoana. Mirary ny soa indrindra
Silvia tsy ataoko ny koba, mividy ilay avy amin'ny lind aho izay tena tsara ary mitsitsy fotoana, ny famenoana dia ilay mijanona kely satria ny ham sy ny fromazy ihany no apetrako.
Salama Silvia! Nataoko ny empanada ny andro hafa ary tena tsara izany, raha mba tiako ny tamina sofritillo bebe kokoa, afaka manampy tongolo sy dipoavatra hafa miaraka ve aho sa manampy azy koa? Misaotra!
Salama zazavavy, ho tsara ve ianareo amin'ny sofrido tonga ao anaty sambo? Fankalazana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny zanako vavy ny talata izao, te-hanao empanada aho, ary tsara izany (satria misy renim-pianakaviana be fitsikerana aho). Misaotra.
Heveriko fa mety ho matsiro be miaraka amin'ny sofrito, saingy mbola tsy vitako izany. Ataovy izany araka ny nolazaiko anao tao amin'ilay resipeo fa nataoko in-droa mahery izao ary mivoaka miavaka izy io, azo antoka fa ho tian'izy ireo izany.
Miarahaba sy miarahaba ny zanakao kely.
andry perez dia hoy izy:
raha maika aho dia tsy manasarotra zavatra: amin'ny koba potika. Vidiko io, efa vita, ao amin'ny Mercadona. tena mangatsiaka tokoa. Raha hofenoiko azy: tuna am-bifotsy, atody nandrahoina, voatabia, dipoavatra natsatsika, dia tampina ao amin'ny tm ny famenoana.
Mamaly an'i pilar perez
Ny tena marina dia manamboatra tsara raha misy maimaika. Mirary ny soa indrindra
Martha C. dia hoy izy:
Salama zazavavy !!!! Ny reniko dia te-hanao an'ity pie ity izay tena tsara be ... ary tianay ho fantatra raha vaovao na mangatsiaka ilay pastry puff puff? ary ho an'ny olona firy no mihoatra na latsaka? Misaotra betsaka… andevozin'ny bilaoginay izahay, arahaba tsara!
Marta, ny pastry puff dia vaovao, ao amin'ny faritra fampangatsiahana eo akaikin'ny saosisy, ny fromazy. Tandremo sao miaraka ny laoka mofomamy kely ary ny mofomamy puff, aza very. Mivoaka somary lehibe ny empanada, manapaka azy io ho 24 na manodidina.
Arantxa dia hoy izy:
Salama zazavavy, misaotra tamin'ny resipeo rehetra, ny tena marina dia tsara daholo izy ireo. Mikasika ny empanada dia tiako ny manontany anao raha azo atao amin'ny koba izay tsy mofomamy satria tsy tianay ny iray izy ireo ary manontany anao koa ny momba ny lafarinina tanjaka, tsy haiko hoe inona izany, mamelà ny tsy fahalalako fa mbola betsaka ny zavatra mila ianarako.
Mamaly an'i Arantxa
Arantxa, raha tsy tianao ny mofomamy puff dia ataovy ny ampahany feno ary apetaho ny koba tianao. Ny lafarinina tanjaka dia manokana ho an'ny koba ary raha mbola mangataka ny fomba fahandro ianao dia tsy azonao ovaina hafa. Manampy ny koba hiakatra izy io ary mipoitra tampoka noho ny lafarinina hafa. Amidiny amina mercadona, carrefour, alcampo, hipercor ...
Salama zazavavy: manantena aho fa afaka manampy ahy ianareo, androany dia nomen'izy ireo lafarinina katsaka, vita amin'ny katsaka, ao anaty vilia fikosoham-bary, ary te hanao empanada miaraka aminy aho, saingy tsy dia haiko loatra, satria mieritreritra aho fa manana afangaro amin'ny lafarinina varimbazaha, ary tsy haiko ny manao azy
ny th, ny koba hafa mazàna dia mivoaka tsara, saingy tsy manana an'io lafarinina io aho
Tsy misy hevitra ny fomba hanaovana azy, tiako ny hanomezanao tanana kely, misaotra betsaka mialoha. Oroka …………….
Valiny amin'i MARISA
Marisa, tratranao aho amin'ity fanontaniana ity. Ny marina dia tsy fantatro ny fomba anaovanao azy. Tsy mbola nifangaro lafarinina mihitsy aho. Ataovy ao amin'ny vondrona Facebook -ntsika ity fanontaniana ity, hahitana raha betsaka kokoa ny olona mamaky azy miaraka ary afaka manampy anao izy ireo. Miala tsiny. Oroka kely
Mahafinaritra ny hevitra sy ny tolo-kevitra rehetra. Tsy maintsy soratako daholo izy ireo ary andramako. Holazaiko fotsiny izany, momba ny famenoana base izay omen'i Silvia antsika, dia nanampy koa aho holatra voapaika sy am-bifotsy. Toa tsara izany. Ah !! MIarahaba an'i ELENA SY SILVIA, IZAO NO BLOGIA AN'NY VADEMECUM-ko.
Cristina tena mahatsikaiky momba ny "Vademecum", faly aho fa tianao ny bilaoginay ary misaotra betsaka anao amin'ny soso-kevitrao momba ny famenoana, tsy maintsy andramana izany.
Fa maninona no ilaina ny manaparitaka ny faobe eo amin'ny plastika roa? dia tsy mifanaraka amin'ny be sy ny maro aho hehehehe
Mahazo aina kokoa ny mihinjitra amin'ny roller ary tsy misy mifikitra aminy. Raha vao mivelatra dia esorinay ny plastika ambony ary alainay ny farany apetratsika tsara eo ambony fitoeran'ny lafaoro, avadika izany.
Manana fisalasalana aho, rehefa miresaka momba ny fanaparitahana ny koba ianao dia ny dikan'ny hoe ny koba vita amin'ny thermomix sy ilay efa novidiana (ohatra ny Lidl) na ilay farany dia tsy tokony ahinjitra.
LORELAY dia hoy izy:
Salama, ny koba mofomamy mofomamy nividy dia tsy maintsy nivelatra sa heverina ho toy izao ny fomba famenoana azy? Raha ny tokony ho izy, dia misy fonosana fonosana hafa tsy misy hoditra miaraka amin'ny paoma.
Valio ny LORELAY
Mameno tsara !! Misaotra anao indrindra. Ny koba novidina dia ampiasaina nefa tsy ahodina. Rehefa esorintsika izy io dia apetraka amin'ny lovia ary afaka fenoina.
Salama Silvia, ny fomba fahandro rehetra novakiako dia tsy maintsy ataoko tsirairay avy, hatramin'ny nividianako ny TM, dia mitaky ny empanada daholo aho, ary na dia resaka fanandramana ho ahy aza ny manan-karena indrindra dia ny tuna, ary izaho ataovy foana ny koba, izy io dia tena zava-dehibe ny hena kisoa ary tsy soloina dibera, ny lafaoro eo am-panaovana ny koba alohan'ny 250º, ary rehefa ao anatiny ny empanada dia ajanoko ho 180, miaraka amin'ity rehetra ity Soso-kevitra ny hanendasako ny dipoavatra ary endasina ny voatabia, ary rehefa manana aubergine aho dia asiana voan-javamaniry kely ho cubes, mba hamaranana dia mametraka tuna be dia be aho, afaka manao azy tsara aho, ataoko toy izany, fa afaka manao izany ianao , sira sy dipoavatra, basily kely…. tm no fahagagana ary manao ny ambiny aho.
Soso-kevitra ho an'ireo izay tia fromazy sy bacon, dia mampiaraka ihany koa ary aza adino ny fanosotra crème na fromazy miempo, na dia manamafy ny koba aza ity fomba fahandro ity, hafafazo amin'ny basilety. FIARAHABANA
Misaotra betsaka noho ity sosokevitra faran'izay mahery ao amin'ny empanada ity !!
paqui valverde perez dia hoy izy:
Salama, izaho dia mpanaraka anao ary hatramin'ny nahitako ny bilaoginao dia tsy nitsahatra nahandro aho, nanontany anao aho raha afaka manamboatra azy io rehefa avy nanao ilay pie, ary mahandro ny andro tokony hampandrosoan'ny hetsika.
Mamaly an'i paqui valverde perez
Tsy mbola nanandrana azy teto aho fa heveriko fa mety ho hevitra tsara. Raha sahy milaza aminay ny vokany.
MARIA DEL MAR dia hoy izy:
Salama, nanandrana nanamboatra ny koba ho an'ny empanada aho ary nijanona ny thermomix ary nahazo Er 69 aho, saingy tsy hitako ny torolàlana ary tsy fantatro ny dikan'izany, mieritreritra aho fa tsy nandanja tsara ny lafarinina ilay masinina ary teo tafahoatra, tsia fantatro, andao hojerentsika raha afaka manampy ahy ianao
Valio amin'i MARIA DEL MAR
Salama Maria del Mar, ny marina dia tsy afaka milaza aminao ny zava-mitranga amin'ny masininao aho. Raha mbola mitohy ny olana dia antsoy ny solontenanao ary lazao azy ireo… efa simba izany volana vitsivitsy lasa izay ary tao anatin'ny roa andro dia azoko….
Fanny dia hoy izy:
Nasiako fromazy i York Ham ary norakofako béchamel matevina kely talohan'ny nanaronako ilay empanada.
Raha tokony ny York Ham dia azonao atao ny mametraka an'i Serrano Ham, mivoaka tsara be koa izy io.
Valiny tamin'i Fany
Salama, vaovao amin'ny forum aho. Fanontaniana iray, mivoaka tsara foana ve ny koba? Indraindray dia mivoaka ho matavy ho ahy izy ary sarotra amiko ny manaparitaka azy. MISAOTRA
Valiny amin'ny oliva
Salama Oliva, tongasoa eto amin'ny forum! Raha ny olanao amin'ny koba dia avelanao hijanona mandra-pahoviana? Imbetsaka, raha tsy dia elastika loatra izy io, dia noho ny tsy fahampian'ny fotoana fialan-tsasatra. Ary ny momba ny "greasy" dia normal satria io koba io dia somary matavy, fa raha hitanao fa tafahoatra dia ahena kely ny dibera.
Misaotra anao. Elaela aho tsy afaka nahita ilay forum. Holazaiko aminao.
Ataoko amin'ny daty sy fromazy gouda izy io
miavaka be ilay izy
Ry Manuel, mandena ny vavako… fifangaroana tsara !!
Manao ahoana daholo! Manana fanontaniana amin'ny pie aho. Ny empanada dia ho an'ny rahampitso tolakandro rehefa hanao sakafo hariva tsakitsaky ao an-trano aho, efa nanao ny saosy ary avelako hiala sasatra io. Ny hevitro dia ny manamboatra koba anio tolakandro ary avelao ny paty vita, fa tsy haiko hoe aiza no tokony hitehirizako azy hatramin'ny rahampitso, na hapetraka ao anaty vata fampangatsiahana izany na avelako eo amin'ny tontolo iainana eo ambony latabatra an-dakozia, afaka manampy ianao izaho. Misaotra anao.
Azonao avela amin'ny hafanan'ny efitrano io, indrindra fa tsy ao anatin'ny fahavaratra isika. Raha ivelan'ny vata fampangatsiahana indray alina izy dia tsy hisy zavatra hitranga aminy ary hihalehibe ny koba rahampitso.
Lazao anay hoe rehefa manana kely ianao, okay?
Misaotra betsaka Ascen! Marina ny anao, tena tsara izany. Tena nahomby.
Faly aho Anna, misaotra anao noho ny hevitrao! Avelako ho anao ny rohin'ny empanada hafa raha sanatria ka mahasahy amin'ny fotoana hafa ianao http://www.thermorecetas.com/2012/05/14/empanada-tradicional/. Ataonay an-trano matetika izy io ary matsiro koa. Oroka!
Fanontaniana iray hafa:
Raha vantany vao vita amin'ny thermomix ny saosy, esorinao ve ilay ranoka tafahoatra?
Anna, raha be ranoka izy, mamafa ny sasany aminy.
Vanessa perez dia hoy izy:
Salama, mety misy milaza amiko ve ny habeny mivoaka avy ao anaty pie, misaotra
Valiny tamin'i Vanessa Perez
Momba ny haben'ny ravina cookie. Ampiasao ho toy ny fotony izy, rakofana taratasy graseproof aloha.
Ainssss…! Omaly aho nanao ny famenoana ny empanada hisakafo hariva ary matsiro !! ???? Novidiko tao amin'ny Lidl ny koba, tsy nanam-potoana hanaovana izany aho! Misaotra!
Patri mahafinaritra! Faly be aho fa tianao izany. Misaotra nanoratra taminay!
Salama!! Nividy koba efa voaomana aho, saingy adinoko ny nitahiry azy tao anaty vata fampangatsiahana ary naharitra roa ora ny maripana tao amin'ny efi-trano. Mety ho lasa ratsy ve? MISAOTRA
Hatramin'ny nahavitako azy voalohany, herintaona lasa izay, tsy mbola nisy fomba fahandro hafa nampiasaina tao an-tranoko.
Mofo voadidy miloko roa